FAMPAHALALANA MOMBA NY ALIKA LABRADOODLE ALIKA KELY SY SARY - ALIKA
Fampahalalana momba ny alika Labradoodle alika kely sy sary
Labrador Retriever / kilalao na alika kely mifangaro Poodle mifangaro
Duncan the Mini Labradoodle amin'ny faha-6 volana— 'Ny volony dia lalina sy mena ary manjavozavo. Izy io dia lehibe araka izay ho azony. Izy dia momba ny haavon'ny lohalika. '
Ny alika Labradoodle dia tsy alika madio. Matetika lakroa iray anelanelan'ny Labrador retriever ary ny Poodle Kilalao, Miniature na Poodle mahazatra mahazatra. Na izany aza, misy fomba roa samy hafa ateraky ny mpiompy ny Mini Labradoodle.
1. Labradoodles kely dia namboarina ho lakroa voalohany teo anelanelan'ny Labrador Retriever sy Miniature Poodle. Ny sasany manana Toy Labradoodles. Ireto habe roa amin'ny Labradoodles kely kokoa ireto dia tratra indraindray amin'ny alàlan'ny insemination fandidiana na insemination artifisialy, fa tsy ny mpiompy rehetra no manao an'io fomba fiompiana io. Ireo alika kely vokatr'izany dia mety ho kely na tsy kely habe. Ny teôria dia hoe ho eo anelanelan'ny haben'ny Miniature Poodle sy ny haben'ny Labrador Retriever izy ireo.
2. Ny mpiompy sasany dia mamokatra Labradoodle kely kokoa amin'ny alàlan'ny fanampiana amin'ny karazany fahatelo. Tamin'ny alàlan'ny fanilihana voalohany ny Labrador Retriever, vehivavy mpiompy olon-dehibe, ny mpiompy sasany dia niampita ny Labrador Retriever niaraka tamin'ny Cocker Spaniel hamokatra alika kely kokoa. Avy eo dia raisin'izy ireo ny vavy Labrador / Cocker ary ampiarahany amin'ny Miniature Poodle, na amin'ny fiterahana voajanahary na amin'ny insemination amin'ny fandidiana / amin'ny artifisialy. Ny alikakely dia ½ Poodle, ¼ Labrador Retriever, ¼ Cocker.
Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany rehetra ianao. Anontanio ny mpiompy izay ifandraisanao amin'ny fomba fiompiana nampiasain'izy ireo hamokarana ny Mini Labradoodle. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Standard: Vehivavy lanja 45 - 60 pounds (20 - 27 kg) Lehilahy 55 - 77 pounds (25 - 35 kg)
Miniature: haavony 17 - 22 santimetatra (44 - 56 cm)
Miniature: lanja 30 - 50 pounds (14 - 25 kg) Ny lehilahy lehibe noho ny vehivavy.
Misy fomba vitsivitsy samihafa amin'ny famokarana mpiompy Labradoodles.
F1 = 50% Labrador ary 50% Poodle: Ity no lakran'ny Lab to Poodle ity dia ity no taranaka voalohany, miteraka zaza salama kokoa! Ny karazany ny volo dia mety milamina toy ny Lab, wiry toy ny Wolfhound Irlanda na wavy / shaggy azon'izy ireo alefa na tsy alefa ireo alika mitovy amin'ny fako dia mety miovaova. Tsy io no lakroa tsara indrindra ho an'ny olona voan'ny allergy mahery.
F1-B = 25% Labrador Retriever ary 75% Poodle (F1 Labradoodle sy Poodle hazo fijaliana): Ity no Labradoodle namboarina niverina tany Poodle wavy curly shaggy endrika doodle tena mifanaraka amin'ny karazana palitao. F1B no mety indrindra tsy misy fandatsahan-drindrina sy tsy fiantrana alika noho ny doodles REHETRA ary ny palitao mora indrindra hikarakarana.
F2 = F1 Labradoodle sy F1 Labradoodle hazo fijaliana: Miaraka amin'ity fampifangaroana ity dia mahazo ny isan-jato mitovy amin'ny Lab Poodle mifangaro ianao tahaka ny F1 Labradoodle, noho izany dia azo inoana kokoa fa handao izy ireo.
F3 = F2 Labradoodle sy hazo fijaliana F2 Labradoodle
Taranaka maro = F3 na Labradoodle andiany avo kokoa ary hazo fijaliana Labradoodle F3 na taranaka ambony: Izany no mahazatra ny Labradoodles aostralianina.
Info momba ny Petite Labradoodle
Fampahalalana Labradoodle mahazatra
'Ireto dia Labradoodles kely telo, misolo tena ireo karazana palitao telo. Bailey, amin'ny ankavia, dia Labradoodle misy razambe misy palitao volon'ondry. Bailey dia 9 volana ary alika mahafinaritra - marani-tsaina, mora zatra ary be fitiavana sy tia lalao. Malemy dia lafo ny volony! Hawi, eo afovoany, dia Labradoodle taranaka voalohany misy palitao volo. 5 taona i Hawi ary milamina tokoa (afa-tsy ny mihazakazaka sy milalao eo amin'ny valan-javaboary!), Ary marani-tsaina — mianatra mievina amin'ny baiko izy! Cooper, eo ankavanana, dia Labradoodle misy razambe maro hafa miaraka amin'ny akanjo volonondry. I Cooper no alika mahatoky indrindra, tia voahilikina ary tia milalao sy mihazakazaka. Mahatalanjona ny kitrokelany! Izy telo mianadahy dia manana ny maha izy azy, ambany tokoa ny fandatsahana azy ary biby fiompy mahatalanjona. Ny karazana alika rehetra dia noforonina sy noforonin'ny olombelona ... vao haingana no novolavolaina ny karazany alika. Ary tsy misy fofona alika! Inona koa no azonao angatahina? - Ny ray aman-dreny mirehareha, Summer & Matt, Ashley & Tim, ary Liz & Brian, avy any amin'ny faritra Seattle avokoa. '
Pita amin'ny 4 ½months taona — Pita dia F1b lahy Mini Labradoodle (Lab 25% Mini Poodle Mini). Ny lanjan'ny olon-dehibe dia 20 ka hatramin'ny 25 pounds. Sary natolotry ny Burr Oaks Dood Ranch
Litter of F1 Mini Labradoodles rehefa mihalehibe izy ireo. Izy ireo dia lakroa 50/50 vehivavy 37-kilao laboratoara Elly May sy Pierre, lehilahy 47 kilao Poodle mahazatra . Sary natolotry ny Burr Oaks Dood Ranch
Alika kely F1 Mini Labradoodle, hazo fijaliana 50/50 an'ny vavy 37-kilao laboratoara Elly May sy Pierre, lehilahy 47 kilao Poodle mahazatra . Sary natolotry ny Burr Oaks Dood Ranch
Ity alika kely Mini Labradoodle ity dia F1b — Lab 25% ary Mini Poodle 75%. Sary natolotry ny Burr Oaks Dood Ranch
Jeb ilay F1 Mini Labradoodle miloko kafe amin'ny taona iray
Murphy the Mini Labradoodle tamin'ny faha-6 taonany taorian'ny nanaovany akanjo fohy
Hijery ohatra misimisy ao amin'ny Miniature Labradoodle
Sary kely Labradoodle 1
Lisitry ny Dog Poodle Mix Dogs
Poodle Mix Dogs miteraka
volomparasy terrier chihuahua mix
yorkshire terrier-shih tzu mifangaro
Aostraliana mpiandry ondry cavalier mpanjaka Charles spaniel afangaro
Jack Russell terrier Chihuahua afangaro Tan
alika afangaro newfoundland sy poodle